दाङमा पनि छुर्पी उत्पादन शुरु – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुष २७, २०७५१२:३२0
लमही, २७ पुस । दाङमा पहिलो पटक छुुर्पी उत्पादन शुरु भएको छ । लमही नगरपालिका–५ को उद्यमशील कृषि बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले गाईको दूधबाट छुर्पी उत्पादन शुरु गरेको हो । संस्थाका व्यवस्थापक विश्वप्रकाश अधिकारीका अनुसार गाईको दूधबाट छुर्पी उत्पादन गरेर सहकारीमार्फत नै बजारमा लगिएको छ ।
सधैँ कुर्ता सुरुवालमा देखिने चर्चित डान्सर सपनामा आयो एकाएक यस्तो परिवर्तन, तस्विर भयो भाइरल !
७८ लाख घुस लिएका पूर्व आयुक्त पाठकसँग बयान लिन सुरु
हरेक अभिभावकले पढ्नै पर्ने कुरा ! बच्चालाई मोबाइल दिनु कतिको घातक हुन्छ ?
च्याम्यिन्स लिग कवाटरफाइनलको ड्र सार्वजनिक, कसको प्रतिद्वन्दी को ?